भूकम्पले निम्त्याएको विपत्तिप्रति मेलबर्नमा चिन्ता व्यक्त (भिडियो) - Himalayan Kangaroo
भूकम्पले निम्त्याएको विपत्तिप्रति मेलबर्नमा चिन्ता व्यक्त (भिडियो)
Posted by Himalayan Kangaroo | ७ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ००:५४ |
हिमालयन कङ्गारु । वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र त्यसपछि १३ र २९ गते गएको अर्को पराकम्पनले नेपालमा वेहिसाव क्षति पुर्याएको छ । हजारौंले ज्यान गुमाएको छ । मौलिक नेपाली संस्कृति र गौरवशाली इतिहासको साक्षीका रुपमा रहेका धरोहर र सम्पदास्थलहरु पनि भत्किए । यसले सुन्दर गाउँ शहरहरुलाई क्षत विक्षत र विरुप पारिदिएको छ । देशको यस्तो अवस्थाबाट कसको पो मन नदुखेको होला र ? नेपालीहरुको यही पीडा र दुखेको मनको अभिव्यक्ति स्वरुप अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा रहेका नेपाली युवा कलाकारहरुले एउटा सांगीतिक सिर्जना गरेका छन् । सेभ नेपाल बोलको उक्त गीतको म्यूजिक भिडियो समेत हालै सार्वजनिक गरिएको छ ।
टंक बुढाथोकी र अनु ढकालको संयुक्त स्वर रहेको उक्त गीतलाई टंक आफैंले शब्द र संगीत दिएका हुन् । यो विपत्तिमा आत्तिएर र दुखी मात्र बनेर बसेर केही हुँदैन । प्रकृतिले निम्त्याएको यो विनाशबाट पार पाउँन जाँगरिला नेपालीहरु आफैं फेरि एकभएर जुटे नयाँ नेपालको पुननिर्माण छिट्टै सम्भव हुने यो गीतको सार छ ।
त्यसैले यो गीतले नेपालीहरुमा हौसला,साहस,ऊर्जा,आत्मबल र आत्मविश्वास बढाउने निर्माण पक्षको दाबी छ । फिल्मकर्मी निर्देशक जीवन रसाइलीको निर्देशनमा बनेको यस गीतको म्यूजिक भिडियो पनि तुलनात्मक रुपमा निकै राम्रो रहेको छ । मेलबर्नमै छायांकन गरिएको यस गीतमा त्यहीका स्थानीय नेपाली कलाकारहरुको अभिनय छ ।
हिमालयन कङ्गारु अनलाइनको संयोजनमा यो भिडियो तयार पारिएको हो । हामी साहसी छौ,हामी हिम्मत हार्दैनौं…सेभ नेपाल बोलको यो गीतको भिडियो अहिले युट्युब मार्फत चर्चित बन्दै छ ।
Previousमिति २०७२ साल जेठ ७ गते विहीवार
Nextअबको काठमाडौँ कस्तो बन्ला ?
संवाद समितीको म्याद आज सकिदै, सहमति हुने सम्भावना न्युन
१५ कार्तिक २०७१, शनिबार १५:२९
के तपाइलाई सख्खरको फाइदा थाहा छ !
२४ असार २०७५, आईतवार १३:२४
बेलायतमा छात्राहरुको ट्वेलेटमा क्यामरा फिट गर्ने भारतीय शिक्षकलाई ४ वर्ष जेल
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार १०:१६
वैदेशिक रोजगारीमा १ वर्षमा ८२१ नेपालीको मृत्यु
२८ श्रावण २०७५, सोमबार ०३:३६